DARK ~ The ICT.com.mm Blog
Genre – Stealth/Action
DARK ဟာဇာတ်လမ်းအသားပေး Single player ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Cell shading graphics ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ကစားသူဟာ အတိတ်မေ့နေသူ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Eric နေရာမှ ဝင်ရောက်ကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး Shadow Leap ၊ Invisible နှင့် နံရံဖောက်ကြည့်နိုင်သော Vampire Vision အစရှိသော Skills များကို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်သလို skill upgrade စနစ်များလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Newer The Devil IsaPart-Timer! (Hataraku Mao-sama!)
Older ၁၅၀၀တန် GSMတွေ ရောင်းတော့မည်